Nakatonin'i Texas ireo teboka fiampitana sisintany mba hampijanonana ny fitomboan'ny mpifindra-monina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Nakatonin'i Texas ireo teboka fiampitana sisintany mba hampijanonana ny fitomboan'ny mpifindra-monina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ao amin'ny tetezana iraisampirenena any Del Rio, Texas, mpifindra monina maherin'ny 8,000 no niampita tany Etazonia ary miandry izy ireo ho voasambotry ny US Border Patrol.
Ny US Customs and Border Protection dia nanambara omaly fa ny masoivohony dia nifanehatra tamina mpifindra monina tsy ara-dalàna 208,887 tamin'ny volana aogositra, fiakarana mihoatra ny 300% hatramin'ny volana aogositra 2020. Isam-bolana tamin'ity taona ity dia nahitana isan'ny fihaonana an-tsoratra raha ampitahaina amin'ireo volana mitovy amin'ny 2020, 2019 ary 2018, ary olona 1.1 tapitrisa no niampita tsy ara-dalàna ny sisintany tamin'ny 2021 hatreto.
Nasain'ny governora Texas nikatona daholo ny teboka niampitana ny sisintany atsimo mba hampijanona ny tondra-dranon'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna ao amin'ny fanjakana.
Nanambara i Abbott fa, tsy toy ny filoha Biden, ny State of Texas dia manolo-tena hiaro ny sisintanintsika sy hiaro ny Amerikanina.
Ny governoran'i Texas, Greg Abbott, dia namoaka fanambarana androany nanambara ny fanakatonana ireo teboka niampitana sisintany enina an'ny fanjakana, "mba hampijanonana ireo karazan'olona (mpifindra monina tsy ara-dalàna) tsy hipoka loatra amin'ny fanjakantsika."
Governoran'i Texas Greg Abbott
"Mampihoron-koditra ny fanaovana tsirambina ny fitantanan'i Biden hanao ny asany sy hiarovana ny sisin-tany," hoy i Abbott, izay Repoblikanina, tao anaty fanambarana iray.
"Tsy toy ny filoha Biden, ny State of Texas dia tapa-kevitra ny hiaro ny sisin-tanintsika sy hiaro ny Amerikanina."
"Nasaiko ny departemantan'ny fiarovana ny besinimaro sy ny zandarimariam-pirenena Texas hanidy ny mpiasa sy ny fiara hanakatona teboka enina amin'ny sisin-tany atsimo mba hampijanonana ireo karazan-dry zareo tsy hipoka loatra amin'ny fanjakantsika."
Ao amin'ny Tetezana Iraisam-pirenena any Del Rio, Texas, mihoatra ny 8,000 mpifindra monina niampita tany Etazonia ary miandry ny fisamborana azy izao US Patrol Border manamboninahitra, hoy ny tatitra ny alakamisy.
Ny vahoaka dia nitombo avo roa heny tamin'ny 4,000 ka hatramin'ny 8,000 hatramin'ny Alarobia, miaraka amin'ny loharanom-baovao mpampihatra lalàna milaza fa maro ny Haisiana.
Ny habetsaky ny valalabemandry dia voalaza fa nandresy ny Border Patrol, izay, hoy i Abbott, dia nangataka tamin'ny State of Texas mba hiditra sy hanidy ny fiampitana.
Del Rio dia iray monja amin'ireo teboka fiampitana telo toy izany manamorona ny sisintanin'i Texas-Mexico.
Ireo mpifindra monina tonga amin'ireo fiampitana ireo dia afaka mangataka fialokalofana na manolotra ny tenany any amin'ny Border Patrol mba hosamborina ary avy eo navotsotra tany Etazonia, miaraka amin'ity politika 'fisamborana sy famotsorana' an'i Obama ity izay naverin'ny filoha Joe Biden tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Ankoatr'izay, niato ny fitantanan'i Biden Trump'S' Mijanona any Mexico ', izay mitaky ny mpifindra monina rehetra hanao ny fialokalofana na ny fangatahana fidirana avy any Mexico ary hiandry any mandra-pivoakan'ireto fanambarana ireto.
Biden koa dia nanova TrumpNy politikan'ny famerenana ireo mpiampita sisin-tany rehetra nandritra ny areti-mandringana COVID-19, nanasokajy ny ankanavaka ho an'ireo latsaky ny 18 taona, nahatonga ny fitomboan'ny zaza tsy ampy taona niaraka tamin'io dia io avy tany Amerika Afovoany nankany Etazonia.
Na izany aza, araka ny angon-drakitra Customs and Border Protection, ny ankamaroan'ny mpiampita sisintany amin'ny 2021 dia olon-dehibe mpitovo.
Ny ladoany sy ny fiarovana ny sisintany nanambara omaly fa ny masoivohony dia nifanehatra tamina mpifindra monina tsy ara-dalàna 208,887 tamin'ny volana aogositra, fiakarana mihoatra ny 300% hatramin'ny volana aogositra 2020. Isam-bolana tamin'ity taona ity dia nahitana isan'ny fihaonambe raha oharina amin'ny volana mitovy amin'ny 2020, 2019 ary 2018, ary 1.1 tapitrisa ny olona dia niampita tsy ara-dalàna ny sisintany tamin'ny 2021 hatreto.
Fotoana fohy taorian'ny fanambaràny dia namoaka fanambarana hafa ny governora Abbott izay nilaza fa ny fitondrana Biden dia nandidy ny hiampitan'ny Texas.
Nilaza i Abbott fa ny mpiasan'ny Departemantan'ny fiarovana ny besinimaro sy ny mpiambina nasionaly dia hijanona eo an-toerana hisakana ny fiampitana.